Html_11 - ရောင်ပြန်လေး(နည်းပညာ)
Home > HTMLသင်ခန်းစာ > Web Development > Html_11
March 30, 2018 HTMLသင်ခန်းစာ, Web Development
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Iframe နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်၊ Iframe က သင့်ဝက်ဆိုက်မှာ တစ်ခြား ၀က်ဆိုက်တစ်ခုကိုဖော်ထည့်သွင်း ဖော်ပြရာမှာသုံးတယ်၊ လွယ်တာတော့ လွယ်ပါတယ်၊ အသုံးများတာကတော့ ခုနောက်ပိုင်းမှာ ကုတ်တွေကသင်ပြတဲ့ သခန်း စာတွေမှာ Iframe ကိုသုံးကြတယ်၊ ရှေ့ သင်ခန်းစာမှာရေးခဲ့တဲ့ htmllayout ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာကို firstwebpage ဆိုတဲ့စာမျက်နှာထဲမှာ ဖော်ပြကြည့်မယ်၊
Iframe ရဲ့တည်ဆောက်ပုံက <iframe src = “”></iframe> အဖွင့် <iframe> နဲ့ အပိတ် </iframe> တို့ကိုပဲ သုံးရတာပါ၊ သူတို့ကိုသုံးတဲ့အခါ Attributeပါမှာကိုသုံးလို့ရမယ်၊ ဒီ့အတွက် Attribute ဖြစတဲ့ scr = “” ကိုသုံးတယ်၊ နှစ်ထပ်ကော်မာ အဖွင့်အပိတ်ထဲမှာ သင်ဖော်ပြလိုတဲ့ ၀က်ဆိုက်နာမည်ကိုဖော်ပြနိုင်နိုင်တယ်၊ အောက်မှာ တော့ htmllayout.html ဆိုတဲ့ ၀က်စာမျက်နှာကို firstwebpage.html ဆိုတဲ့စာမျက်နှာမှာဖေါ်ပြမယ်၊ ဒီတော့ <iframe အဖွင့်မှာ src = “” ထည့်မယ်၊ နှစ်ထပ် ကောင်မာ အဖွင့်အပိတ်ထဲမှာမှ ဖော်ပြလိုတဲ့ ၀က်ဆိုက်ရဲ့ URL ကိုထည့်မယ်၊ အောက်မှာကြည့်ပါ၊
what is this website name <br/>
hey buddy havealook at this site , it is my WOW website. i am sure you will go crazy for it.
<iframe src= "htmllayout.html"> </iframe>
အထက်က ကုတ်ကို Run ကြည့်လိုက်ရင်တော့ Iframe ထဲမှာ “htmllayout.html” ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွေ့ရမှာပါ၊Iframe ရဲ့ အမြင့် နဲ့ အကျယ်ကို လဲ Attributes တွေသုံးပြီး ပြုပြင်နိုင်တယ်၊ အခု height ကို 200 လို့ထားပြီး width ကို 500 လို့ထားလိုက်မယ် အောက်က အတိုင်း
<iframe src= "htmllayout.html" width= "500" height= "200"> </iframe>
အထက်မှာပြထားတဲ့ကုတ်ကို အပေါ်ဆုံးက ကုတ်ထဲရဲ့ iframe နေရာမှာထည့်ပြီးပြောင်းလိုက်၊ ဒါဆိုရင် တော့ အမြင့် နဲ့ အကျယ်ပြောင်းသွားတဲ့ iframe ပုံစံကိုတွေ့ရမယ်၊ ဒီလိုပဲ iframe ရဲ့ border တွေကိုလဲဖျောက်ထားနိုင်တယ်၊ ကြိုက်တဲ့ အရွယ်အစားချိန်နိုင်တယ်၊ သုံးရမယ့် Attribute က iframeborder =“” လို့သုံးရမယ်၊ ဘော်ဒါတွေကိဖျောက်ထားချင်ရင် နှစ်ထပ် ကော်မာထဲမှာ0သုံးညလို့ထည့်လိုက်၊ (အရွယ်အစားပြောင်းချင်ရင် ပြောင်းချင်တဲ့အရွယ်အစားကို ရေးထည့်လိုက်) အောက်မှာကြည့်၊
<iframe src= "htmllayout.html" width= "500" height= "200" iframeborder= “0”> </iframe>
အထက်က အတိုင်းဆိုရင် Iframe ရဲ့ border ပျောက်ကသွားမှာပါ၊<iframe ကို Traget Link အနေနဲ့ လဲသုံးလို့ရပါတယ်၊ အောက်က ဥပမာ ကို ရေးပြီးလေ့လာကြည့်ပါ၊
<iframe src="demo_iframe.htm" name="iframe_a"></iframe>
<p><a href="http://www.yaungpyanlay.com/" target="iframe_a">ရောင်ပြန်လေး(နည်းပညာ)</a></p>